Shinlay: June 2009
အဲ့ဒီခြံလေးမှာ Summerfest လုပ်တာ
ကျမ Johannisbeere ခူးနေတာပါ။ Thomas ကတော့ စတိုင်ထုတ်နေရဲ့။
မီး၊ရေ၊လေ၊မြေ ဆိုတဲ့ ဓါတ်လေးပါးကို အဖွဲ့ ခွဲပြီး သရုပ်ဖေါ်ကြတယ်။
ကျမနဲ့ ကျမမိတ်ဆွေက မြေ၊ ကျောက်တုန်းလေးတွေကို ဆင့်ပြီး
သရုပ်ဖေါ်တယ်။ မြေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းပြနေတာ။
လက်ထဲကခွက်က ဘီယာမဟုတ်ဘူးနော်။ အချိုရည်ပါ။
နောက်တော့ အသားကင်စားကြတယ်။ အစားမက်နေလို့ ဓါတ်ပုံမပါတော့ဘူး။
Posted by Shinlay at 17:143comments:
ကျမ နဲ့ ပရုပ်လုံး အကြောင်း
မနေ့ ကဘီဒိုရှင်းရင်း အတွေးတစ်ခုဝင်လာတာနဲ့ ရေးလိုက်တာ။
အမေ့အိမ်မှာတုန်းကဆို ဘီဒိုတွေထဲမှာ အမေက ပရုပ်လုံးတွေ ထည့်လေ့ရှိတယ်။
ဘီဒိုတွေ၊သေတ္တာတွေဖွင့်လိုက်ရင် ပရုပ်လုံးနံ့ လေးကိုသင်းနေတာပဲ။
ကျမဒီကိုရောက်တော့ ဘီဒိုထဲထည်ဖို့ ပရုပ်လုံးရှာမတွေ့ ဘူး။ ဒါနဲ့ အမှတ်တမဲ့
ပဲထားလိုက်တယ်။ ရန်ကုန်ပြန်တော့ လှည်းတန်းဈေးမှာ ဂျာမနီပရုပ်လုံးဆိုပြီး
အော်ရောင်းနေတာတွေတော့သတိရပြီး အပြန်အတွက် တစ်ထုပ်ဝယ်လာခဲ့တယ်။
ဒီပြန်ရောက်တော့လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့မသုံးဖြစ်ပြန်ဘူး။
တနှစ်တော့ မြန်မာပြည်မှာ (၆)လသွားနေကြဖို့အကြောင်းဆုံလာတာနဲ့စောင်တွေ၊
အနွေးထည်တွေ သေသေချာချာ လျှော်ဖွတ်ပြီး Keller /basement ထဲမှာ သိမ်းမယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီအချိန်က အခုနေတဲ့အိမ်ခန်းကိုပြောင်းလာခါစ၊ အိမ်ကလည်း အသစ်ဆိုတော့
ဒါနဲ့ မြန်မာပြည်က၀ယ်လာတဲ့ ပရုပ်လုံးတော့ အသုံးတဲ့ပြီ ဆိုပြီး ပရုပ်လုံးတွေ ကို
အ၀တ်တွေထဲထည့်ခဲ့လိုက်တယ်။ (အိမ်ရှင်မ ပီသတာလေ။)
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့ လည်း မြန်မာပြည်မှာ (၆)လလောက်ကြာသွားတယ်။ အပြန်ကြတော့
Thomas က (၁)လလောက်စောပြီး ပြန်လာတယ်။ သူပြန်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့ ကြ
တော့ ကျမဆီကို Thomas ပို့ လိုက်တဲ့ Email တစ်စောင် ၀င်လာတယ်။ သူ့ Email
ဖတ်ပြီး ကျမ ငိုရမလား၊ ရီရမလား၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။
သူရေးလိုက်တာက... သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ခန်းဝမှာ စာတစ်စောင် ရောက်နေ
တယ်တဲ့။ စာထဲပါတာက... ကျမတို့Basement ထဲက ထူးဆန်းတဲ့အနံ့ တွေထွက်နေတယ်။
အနံ့ က ပိုးသတ်ဆေးလို ဓါတုပစ္စည်း အနံ့ ရတယ်။ ဒီတော့ Basement အခန်းထဲမှာ
တခုခုဖြစ်နေပြီဆိုပြီး ကျန်းမာရေးရုံးကို အကြောင်းကြားထားကြောင်း။ အဲ့ဒီအခန်း
နားကိုလည်း မသွားရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း နဲ့ကျမတို့ ရောက်ရောက်ချင်း
စစ်ဆေး ပေးဖို့ရေးထားတာ။
Thomas ခမျာ ခရီးရောက်မဆိုက် Basement ထဲသွားပြီး ဘာများလည်းလို့ ရှာရတော့
တာပေါ့။ ဒီတော့မှ အဲ့ဒီအနံ့ က ကျမထည့်သွားတဲ့ ပရုပ်လုံးတွေဆီကဖြစ်နေတာ။
သူ့ ခမျာပရုပ်လုံးတွေဖယ်၊ အ၀တ်တွေကိုလေလုံအောင် ပလတ်စတစ်အိပ်တွေနဲ့ 
ပိတ် ၊ လူတွေကိုတောင်းပန် နဲ့အလုပ်များသွားရှာတယ်။
ကျမပြန်ရောက်တော့ မျက်နှာပူပူနဲ့ ပဲ ဆက်နေလိုက်တယ်။ အိမ်ကလူတွေကတော့
ကျမကိုကွယ်ရာမှာ ပရုပ်လုံး လို့ များခေါ်နေမလားပဲ။ မတတ်နိုင်ဘူး။
ဒီမှာ ပရုပ်လုံးနံ့ ကို မကြိုက်ကြဘူး။ တယောက်ယောက်ဆီက အဲ့ဒီအနံ့ ရရင်
တခါကလည်း သူငယ်ချင်းတယောက် ဒီကိုလာလည်တာ အင်္ကျီတွေမှာ
ပရုပ်လုံးနံ့ တွေစွဲလာလို့ အိမ်ရှင်က အ၀တ်အားလုံးပြန်လျှော်ဖို့ ပြောတယ်တဲ့။
ဒီမှာဘီဒိုထဲထည့်ဖို့Deo အထုပ်လေးတွေဝယ်လို့ ရတယ်။ ပိုးကောင်မကိုက်
အောင်အတွက် သုံးတဲ့ အထုပ်လေးတွေလည်း ရှိတယ်။
ရန်ကုန်အိမ်မှာတော့ အမေ့စိတ်ကြိုက် (ကျမတို့ ဓလေ့အတိုင်း) ပရုပ်လုံးနံ့ တွေ
Posted by Shinlay at 09:549comments:
ကျမတောင်ဘာလိုလိုနဲ့အသက်(၄၀)ကျော်သွားပြီ။ ငယ်ငယ်တုန်းက
ဆို ဒီလို (၄၀)ကျော် အမျိုးသမီးတွေကို အန်တီလို့ ခေါ်ခဲ့တာပေါ့။
ကျမတို့ Asian တွေ ကဂျာမန်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် နုတယ်ပေါ့လေ။
သူတို့ ကို ကျမအသက်ပြောပြရင်„မထင်ရဘူး။ဟုတ်လို့ လား“ စသည်
ဖြင့်ပြန်ပြောကြလေ့ရှိတယ်။ Compliment ပေါ့။
အဲ ရန်ကုန်ပြန် ရင်တော့ အန်တီအခေါ်ခံရတာ (၂)နှစ်လောက်ရှိပြီ။
ဈေးထဲမှာ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ လူငယ် တွေက ကျမကို အန်တီလို့ 
ခေါ်နေကြပြီ။ ဒီမှာတောင် ၁၈ နှစ်အရွယ် မြန်မာလေးတယောက်က
ကျမကို အန်တီလို့ ခေါ်တယ်။ ကျမကတော့ အန်တီလို့ ပြောလေ့မရှိ
တော့ကိုယ့်ကိုကိုယ် အစ်မလို့ ထွက်သွားရော။ သူ့ ခင်မျာ အစ်မ
လို့ ပြောင်းခေါ်ရှာတယ်။ ကျမလည်း အစ်မပြောလိုက်၊ အန်တီပြော
လိုက်နဲ့ ပေါ့။အသက်ကဖြင့် ကြီး နေပြီ အခုထိ အစ်မ အခေါ်ခံချင်
တုန်းပဲလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးသူ့ ခင်မျာ ရသွားမလားပဲ။ ကျမတို့ 
အခုတလော သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဖုန်းပြောရင်း ကျမတို့ 
နှစ်ယောက်စလုံးသတိထားမိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ပြောကြတဲ့ အကြောင်း
အရာတွေက ငယ်ငယ်တုန်းကလို အ၀တ်အစား အကြောင်း၊ ရုပ်ရှင်
အကြောင်း၊ ဟိုသတင်း၊ဒီသတင်း၊ဟိုလူ့ အကြောင်း၊ ဒီလူ့ အကြောင်း
စတာတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။အသက်(၄၀)ကျော် ခေါင်းစဉ်တွေက
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘာသာရေး တွေများလာတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက်
နေကောင်းရဲ့ လားမေးရင်း ကိုယ်ရဲ့ ဝေဒနာတွေလေးတွေပြောပြကြ၊
နှစ်သိမ့်ကြ၊အားပေးကြ၊ အကြံပေးကြနဲ့ ပေါ့လေ။
တခါလေ စိတ်အခန့် မသင့်လို့ ဒေါသထွက်စရာလေးတွေရှိလို့်ဖွင့်မိရင်တောင်
တရားသဘောလေးနဲ့ အားပေး နှစ်သိမ့် ကြတယ်။ သားသမီးတွေရှိရင်တော့
ဒါပေမဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ အစားအသောက်အကြောင်းပါ။
ဘာချက်တယ်၊ ဘာစားချင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်တယ် စသဖြင့်လေ။
ဟုတ်တယ် ကျမ မငယ်တော့ဘူး။ စကားပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ ပြောင်းလာ
ရုံတင်မကဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း တွေ့ လာရပြီ။ ဟိုနားကနာ၊
ဒီနားကနာနဲ့ ငယ်ငယ်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး။ အသက်က စကားပြောလာပြီ
ကျမအမေက တော့ ဖြေးဖြေးသက်သာလုပ်ပါ သမီးရယ်၊ ကိုယ့်အသက်လည်း
မေမ့နေနဲ့ အုံးနဲ့ လို့မကြာခဏ သတိပေးရှာတယ်။
(Duisburg မှ မမ အတွက် အမှတ်တရ......)
Posted by Shinlay at 18:349comments:
Today(22.06.09) is our 10th Wedding Anniversary. We celebrate
very simply. This morning Thomas gave meanice ring, which I like.
He picked me up at my work and we
went to Staufen, where our official
married ceremony took place. We
packed the same packing place and
walking around. Today it was raining.
Last 10 years was sunny.
Then we went toarestaurant and
havealunch together.
Today I suggested to eat inagerman restaurant, which we are
not frequently go and eat. Normally we are used to go Indian or
Thai one.But it was notabad idea.
After lunch we made some photos,
When we ware back home, we
called my mother. She was also
happy to listen what we were doing today.
In the evening we went to Fitness Studio together. We did Miha circle
training together and went to the Steam-Bath.
Today isanice day for us. I hope that we can carry on understanding
and kindness each other for future.
Posted by Shinlay at 16:39 10 comments:
ယိုးဒယား ပွဲ (Königschaffhausen)
ကျမတို့ ဆီမှာ နွေရောက်ပြီဆိုရင် ပွဲလေးတွေ လုပ်ကြတယ်။ ကျမတို့ 
က စနေ၊တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် ဘယ်နား ဘာရှိလဲ ရှာပြီး သွားလေ့
ရှိတယ်။ ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် ဆိုင်တွေပါပိတ်တော့ ပျင်းစရာကြီး။
ဟိုနား၊ဒီနား သွားမှပဲ လူလေးဘာလေး မြင်ရတာ။
မနေ့ ကတော့ Königschaffhausen ဆိုတဲ့မြို့ မှာ ယိုးဒယားပွဲ ရှိတာနဲ့ 
ရောက်သွားတယ်။ Thomas က ယိုးဒယား အစားအစာဆို အလွန်
ကြိုက်တော့ တက်ကြွနေရော။ ကျမတို့ ရောက်တော့ နေ့ လည်(၃)နာရီ
လောက်ရှိပြီ။ ကပွဲတွေ လည်းပါတယ်။ အစားအသောက် ရောင်း
တာ တော် တော် စုံတယ်။ ဆိုင်တွေက မနှစ်ကလောက်တော့ မများဘူး။
ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း၊ အသားကင်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ ကြာဆံပြုတ်၊
Tom Yam၊ မုံ့ လင်မယား၊ မုံ့ လက်ဆောင်း၊အအေးစုံ၊ ဟင်း နဲ့ ထမင်း
(ဂျာမန်အကြိုက်)၊ ကော်ပြန့် ကြော်၊ ယိုးဒယား အစားအစာ အခြောက်
အခြမ်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်တဲ့ 
ကျမ ကတော့ ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း ၀ယ်စားတယ်။ ၅ ယူရို
ပေးရတယ်။ စားကောင်းတယ်။ Thomas ကတော့ ကြက်သားဟင်း နဲ့ 
ထမင်း စားတယ်။ ဆံပင်လည်းညှပ် ခဲ့သေးတယ်။ တလောက ကိုယ်တိုင်
အစွမ်းပြလိုက်တာ မလှလို့ ...ညှပ်ခ လည်းသက်သာတယ်။ ညှပ်တာလည်း
ကောင်းတယ်။ ၁၀ ယူရို။
ပွဲက ဒီနေ့ လည်းရှိသေးတယ်။
Thomas က သရက်သီး နဲ့ကောက်
ညှင်းပေါင်း သွားစားဖို့တက်ကြွနေရဲ့ ။
ကျမတို့ မိတ်ဆွေ ကို John နဲ့ 
Ludwig တို့ ကအဲ့ဒီမြို့ မှာနေတော့
ဒီနေ့ သူတို့ နဲ့ တွေ့ ဖြစ်မယ်။
Posted by Shinlay at 18:19 1 comment:
ကျမ နဲ့စက်ဘီးများအကြောင်း
ကျမငယ်ငယ်က ကိုကြီးရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် စက်ဘီးစီးသင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရုံလေးပေါ့။ဒီရောက်တော့ ဒီမှာတော်တော်များများ စက်ဘီးစီးကြတယ်။
ဟိုနား ဒီနား၊အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် သိပ်မဝေးရင် စက်ဘီးကိုသုံး
ကြတယ်။ ကျမနေတဲ့ Freiburg ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အများစုက
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ကြတဲ့ သူ(Green) တွေများတယ်။
သူတို့ ဟာ ကားတွေကို မကြိုက်ဘူး။ Handy, Computer စတာ
တွေကိုမကြိုက်ဘူး။ အဲ့ဒီပစ္စည့်းတွေကထွက်လာတဲ့ ဆိုးကျိုး တွေကို
မကြိုက်ကြဘူး။ ခေတ်သစ် ဆေးပညာထက် သဘာဝဆေးပညာကို
နှစ်သက်ကြတယ်။ ဈေးဝယ်ရင်လည်း Bio ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ကြတယ်။
ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေကြောင့် လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ Life Style
ဒါကြောင့့် ကျမနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စက်ဘီးများတာမဆန်းပါဘူး။
ဒီတော့ကျမလည်း ကြိုးစားပြီး စက်ဘီးနင်းရတော့မှာပေါ့။ ဒီရောက်ပြီး
တစ်လ အကြာမှာ စက်ဘီး မှောက်ပါလေရော။ ကျမ လည်း ဒူးပြဲ၊
လက်ကွဲနဲ့ ပေါ့။ နင်းကျင့်မရှိတော့ မောလိုက်တာ မပြောပါနဲ့ တော့။
ဒီမှာ စက်ဘီးနောက်ကနေထိုင် စီးခွင့်မရှိဘူး။ ကလေးတွေတော့
ကလေးထိုင်တဲ့ခုံနဲ့ ဆိုလိုက်စီးလို့ ရပါတယ်။
ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာလည်းစီးခွင့်မရှိဘူး။ စက်ဘီးစီဖို့ သီးသန့် 
လမ်းတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီလမ်းတွေက ကျမအတွက်တော့ သိပ်ကို
အဆင်ပြေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း တခါတခါတော့ လမ်းမပေါ်
တက်စီးရတာတွေလည်း ရှိတာပေါ့လေ။ ကျမကကားတွေ
ကိုကြောက်တတ်တော့ စက်ဘီးစီးရမှာလည်း ကြောက်ပြန်ရော။
ဒီတော့တတ်နိုင်သလောက် စက်ဘီးမသုံးဘူး။ လမ်းလျှောက်ရ
ဒီမှာစက်ဘီးသုံးတာများသလို၊ ပျောာက်တာလည်းများတယ်။ ကျမ
တို့ ၅နှစ်အတွင်းစက်ဘီး ၄ စီး အခိုးခံရတယ်။ တချို့ ကတော့
သူတို့ အမြန်လိုလို့ တွေ့ွရာစက်ဘီး ကို ယူသွားတာ။ တချို
့ကတော့ တမင်သက်သက်ကို ခိုးတာ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ
ခိုးတယ်ဆိုတာတော့ ကျမ အတိအကျ မပြောတတ်ဘူး။
ဒီတော့ စက်ဘီးရှိရင်စက်ဘီးခတ်ဖို့ သော့ကောင်းကောင်းရှိဖို
့လိုတယ်။ ဒါတောင် တစ်စီးလုံး ခိုးမရလို့ သူတို့ လိုအပ်တဲ့အပိုင်းပဲ
ဖြုတ်ခိုးသွားကြ သေးတယ်။ ပိုင်ရှင်ကလည်း အင်္ဂါမစုံ တော့တဲ့
သူ့ ရဲ့ စက်ဘီးအစုတ်ကို ပြန်မ
ထားလိုက်တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ 
Posted by Shinlay at 18:02 No comments:
Essen aus Myanmar
Die Leute haben mich oft gefragt, wie das Myanmar Essen ist.
Das Essen von Thailand, China und Indian ist hier sehr berühmt.
Also möchte ich euch das Essen aus Myanmar vorstellen.
Myanmar liegt zwischen Indian und China. Unser Essen ist
natürlich beeinflusst von diesen Ländern.
Wir benutzen Zitronengras, Koriander, Kokosnüsse, Fisch- und
Sojasauce, Erbsen und Bohnen. Fisch ist aufgrund der langen
Küste ein wichtiger Bestandteil der Küche. In Myanmar essen
wir traditionell mit den Fingern.
Wenn Myanmar sich treffen, reden sie über Essen oder kochen
sie etwas zusammen und essen zusammen. Hast du schon
gegessen? Oder was hast du heute gekocht? Dies sind normale
Gespräche in Myanmar. Jetzt möchte ich ein paar Gerichte,
die man in Myanmar überall bekommen kann, vorstellen.
Monhinga (မုန့် ဟင်းခါး)
Kurkuma und Bananensprossen abgeschmeckt, zusammen mit
dünnem Reisnudeln. In Myanmar kann man es überall und
Es gibt verschiedene Arten je nach ihrer Herkunft. Wenn das
Rezept aus Pyar Pon kommt, dann es ist Pyar Pon Monhinga,
kommt aus Hinthada, dann es ist Hinthada Mohinga. Monhinga
kommt ursprünglich aus der Ayeyawaddy Division im Süden von
Myanmar, wo es viele Süßwasserfische gibt.
In Myanmar essen wir es vom Frühstück bis zum Abendessen.
Let-thoke (mit den Fingern gemischte Salatmischung)
Das Gericht wird als Haupt-oder Zwischenmahlzeit gegessen.
Grundlage sind Reis, Nudeln, Glasnudeln, gekochten
Kartoffelscheiben, gebratene Tofu, geschnetzeltem Kohl und fein
geriebener grüner Papaya. angereichert mit gebratenem Knoblauch,
Knoblauchöl, geröstetem Bohnenpulver, getrockneten
Garnelenpulver, Tamarindenmus und Fischsauce. Myanmar Frauen
lieben das Gericht. Sie können ihre individuellen Geschmacksrichtungen
wie Würze, Salz oder Schärfe bestimmen.
Ohn no Kauswe (အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ)
Das ist Kokosmilchsuppe mit Hühnerfleisch und Nudeln. Ich habe
diesen Post schon geschrieben. Bitte nachsehen unter Food.
Kokosreis mit Hühnchen Curry (အုန်းထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း)
Dieses Gericht wird an besonderen Tagen zubereitet. Der Reis
wird mit Kokonussmilch, ein bisschen Zucker und in Scheiben
geschnittene Zwiebel gekocht. Dazu Hühnercurry, Nga Pi
Kyaw (gebratene Fischpaste mit Chili und Garnelenpulver)
und saure Rosellensuppe.
Tofu oder Pae pyar (တို့ ဟူး ၊ ပဲပြား)
In Myanmar gibt es drei Sorten Tofu: Den festen weißen, den
die Chinesen aus Sojabohnen herstellen, den gelbfarbenen aus
Kichererbsenmehl und den, die die Kachin aus Reis zubereiten.
Der weiße heißt Pae Pyar. Der gelbe heißt Tofu.
Der gelbe Tofu wird in dicken Scheiben geschnitten und in
schwimmendem Fett gebraten. Das ist zu jeder Tagezeit ein
köstlicher Imbiß. Durch das Braten wird die weiche, cremige
Masse von einer knusprigen dünnen Haut überzogen. Eigentlich
kommt diese Art ursprünglich aus der Shan Region.
Das Gericht nach chinesischer Art ist sehr berühmt in Mandalay.
In Yangon und in anderen Städten kann man es einfach
bekommen. Aber mann sollte sich nach dem besten Mee-Shay
Laden in dem Stadt erkundigen. Für dieses Gericht werden
dicke Reisnudeln mit cremig weichem Schweinefleisch
vermischt, mit schwarzen Bohnen, zerdrücktem Knoblauch
und Essig angereichert und mit ein wenig eingelegtem Tofu
servieren. Das fette Schweinefleisch passt ausgezeichnet zu
dem kräftig würzigen Geschmack der anderen Zutaten.
Die köstliche Mischung auf das Genaueste zusammen zu stellen
ist die Kunst der Mee-Shay Verkäuferin.
Mon-Ti (မုန့် တီ)
Mon-Ti ist das traditionelle Hauptgericht von Mandalay,
wie Mohinga in Yangon. Es ist dicke Reisnudeln mit geschnetzeltem
Hühnerfleisch, die in Bratensauce gekocht und mit Bohnenpulver
sowie ein wenig Zwiebelöl versetzt werden.
Dies ist der Pökeltee. Wir essen ihn als Snack, als Dessert oder zu
jedem beliebigen Zeitpunkt des Tages. In allen wichtigen
traditionellen Zeremonien servieren wir immer La-hpat.
Es schmeckt wie die kräftigere Version einer Pesto-Sauce
und wird aus den obersten Spitzen der Teeblätter hergestellt.
Nachdem er sechs Monate lang vergraben worden ist, ist die
nötige Reife für den Verkauf erreicht.
Er wird mit Knoblauch, grünen Chilischoten und einigen
Spritzer Limonensaft zu einer Paste zerrieben.Diese Paste
wird in Öl eingelegt und zusammen mit gerösteten Bohnen,
Erdnüsse, Sesamsamen, gebratenem Knoblauch und
getrockneten Krannen verspeist.
Sehr gerne wird diese Paste als Gewürzen und als Salat
verwendet. Alle Zutaten werden mit geschnittenen
Kohlstreifen, Tomatenkeilen, frischen Knoblauchzehen
und einigen grüne Chilischoten gemischt. Am besten schmeckt
ein solcher Salat zu kaltem Reis und einem grüne Tee.
Diese Gerichte sind die beliebtesten Speisen in Myanmar.
Aber bei den Ausländern sind diese Speisen nicht immer
beliebt. Ich freue mich, dass ich euch die Köstlichkeiten
aus Myanmar vorstellen könnte.
Durch das Buch von Ma Thanegi, „Pilgerreise in Myanmar“
habe ich die Idee bekommen.
Posted by Shinlay at 14:466comments:
မြန်မာပြည်ကို လွမ်းရတဲ့အထဲမှာ တစ်ခုကတော့ သံဃာ့ဒါန အလှူ ပြုခြင်းပါ။
ဒီမှာ ထေရ၀ါဒ သံဃာ က အလွန် တွေ့ ဖို့ ခက်ပါတယ်။ တွေ့ ပြန်တော့လည်း
ဆွမ်းကပ်ခွင့်ရဖို့ ၊ ဓမ္မတရားနာကြားခွင့်ရဖို့ က မလွယ်ပြန်ဘူး။
ဘာလင်မြို့ က သူငယ်ချင်း သိင်္ဂီ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးဇင်း Ashin Ghosita
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် အိမ်မှာဆွမ်းကပ်ရတာ၊တရားနာရတာ ဟာမဆန်းပေမဲ့
ဒီမှာနေတဲ့(၁၀)နှစ်အတွင်း တခါမှ အခွင့်မသာခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ဦဇင်း က
ကျမတို့ ဆီကိုကြွလာပေးလို့ကျမတို့ အတွက် ထူးခြားလှတဲ့ အခွင့်ထူး၊
ကျမတို့ နေတဲ့ ဂျာမနီတောင်ပိုင်းမှာ မြန်မာကသိပ်မရှိဘူး။ သေချာတွက်ကြည့်မှ
(၅)ယောက်ပဲရှိတာ။ ဦးဇင်းကြွမယ်ဆိုတော့ အားလုံးက ၀မ်းသာကြတာပေါ့။
Thomas လည်းပါတာပေါ့၊ သူက ကျမတို့ ထက်ပိုတောင် ၀မ်းသာမလားပဲ။
ဦးဇင်းကဒီကိုကြွလာမယ်လည်းပြောရော ဦးဇင်း တရားပေးဖို့ ခုံကို ချက်ချင်းသွားမှာရတယ်။၀ိနည်းနဲ့ အညီ ဦးဇင်းကို ဧည့်ဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ဟိုလူ့ မေးရ၊ ဒီစာအုပ်ဖတ်ရနဲ့ ပေါ့။ ဒီအတွက်လည်းပီတိဖြစ်ရတာ။ ရက်နီးလာတော့ ဆွမ်းကပ်
ဖို့ကောင်းနိုးရာရာ စဉ်းစားရင်း ပီတိဖြစ်ရပြန်ရော။
ဦးဇင်းရောက်တော့ ကျမတို့ အားလုံး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရတာ။ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီးတော့ ဧည့်ဝတ်ပြုကြတယ်။ သံဃာနဲ့ဝေးနေတဲ့ ကျမတို့ဧည့်ဝတ်ပြု တဲ့အခါ အမှားပါရင်တော့ ဦးဇင်းကနားလည် ခွင့်လွှတ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျမတို့ ကို သံဃာတော်ဖူးခွင့်၊ တရားနာခွင့်၊ ဆွမ်းကပ်ခွင့် စသည်ဖြင့်
ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်များရရှိစေတဲ့အတွက် ဦးဇင်းအား အထူး
Posted by Shinlay at 13:38 No comments:
Hier ist Myanmar Nachtisch.....
Heute backe ich Grießkuchen, der traditional Nachtisch in Myanmar.
Wir richten die Rauten Grießkuchen auf einem kleinen Teller an und servieren sie am Ende einer reichhaltigen Mahlzeit mit Kaffee oder Tee.
Für 8-10 Personen brauchen wir:
250 g feines Greißmehl
475 ml Kokosmilch ( 1 Dose)
50 g weiße Mohnsamen
50 g Butter,zerlassen
1. Einen großen Topf erhitzen und das Greißmehl zugeben. Unter ständigem Rühren gründlich rösten. Die Eier mit der Kokosmilch und Zucker verquirlen und mit dem Waser zum Mehl geben. 30 Minuten beiseite Stellen.
2. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Greißpaste zugeben und bei mäßiger Hitze unter ständigem Rühren etwas 15 Minuten kochen,bis sie dick und schwer wird.
3. Sultaninen und Mandeln in den Greiß rühren ind in einer 25 cm großen, quadratischen Backform ausbreiten.Die Oberfläche glattstreichen ud mit Mohnsamen bestreuen.
4. Die zerlassene Butter über die Überfläche des Greiß tröpfeln und unter einen vorgeheizten Gril Stellen,bis sie eine helle, goldbraune Farbe annimmt.
5. Etwas 20 Minuten in die Mitte eines auf 200°C (Gasherd: Stufe 6) vorgeheizten Ofens stellen. Nachher ankühlen lassen. In Rauten schneiden und servieren.
Posted by Shinlay at 09:475comments:
Ashin Ghosita at our Place
Pye Son aung, Ko John,U KoKo Maung,
U Ludwig and YuYu with Ashin Ghosita
Myanmars in Baden
Shwe Chi and Strawberry
Posted by Shinlay at 10:10 No comments: